"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : Android OS များအလိုက် USB Debugging ကို On နည်း
Android OS များအလိုက် USB Debugging ကို On နည်း
Android 4.2 ရဲ့ အထက်ပိုင်း Version တွေမှာ Developer Options Menu ထဲမှာရှိတဲ့ USB Debugging Option ကိုဖျောက်ထားပါတယ် ယခင် Version များမှာတော့ USB Debugging Option ကို
Developer Options Menu ထဲမှာထဲ့ပေးထားတာဖြစ်လို့ ရှာရတာလွယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖျောက်ထားတဲ့ Developer Options Menu ကိုပြန်ဖေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုပြန်ဖေါ်ပေးဖို့ ရန် "Settings" ထဲကိုဝင်ပါ ပြီးရင်အောက်ဆုံးကိုရောက်အောင်ဆင်းပါ အောက်ဆုံးမှာ "About phone" ဒါမှမဟုပ် "About tablet" ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ "About phone" ကိုဝင်ပြီး "Build Number" ဆိုတဲ့နေရာကို ရှာပါ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
ဒီတော့ ပျောက်နေတဲ့ Developer Options ကိုပြန်ဖေါ်ဖို့ Build Number ဆိုတဲ့နေရာကို လက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ခေါက်ပေးပါ ဒီလိုခေါက်ပေးတဲ့အခါမှာ
"You are now3steps away from beingadeveloper."
"You are now2steps away from beingadeveloper."
"You are now 1 steps away from beingadeveloper." ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် မြင်ရပြီး နောကဆုံး "You are nowadeveloper!" ဆိုတဲ့စာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီစာကြောင်းကိုမြင်ရပြီဆိုရင်
Settings ထဲကနေ > Developer Options ထဲကိုဝင်ပါ ပြီးရင် > USB Debugging ကို Enable လုပ်ပေးပါ ကျနော် ကတော့ On ပေးတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် အမှန်ချ စ်လေးပေးတာကို Enable လုပ်တယ် On ပေးတယ်လို့ ပြောတာပါ အောက်ပုံကို ကြည့်ပါ။
Android 5.0 Lollipop ကို USB Debugging မှာ Enable လုပ်ပြီးအမှန်ချစ် ပေးမယ်ဆိုရင် Android 4.2.x. မှာလုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းအတူတူပါဘဲ။
1 > Settings > About Phone > Build number > Tap it7times to become developer;
2 > Settings > Developer Options > USB Debugging.
အထူးသတိထားရန် အဖြစ်အသိပေးထားချင်တာလေးကတော့ USB Debugging ကို မလိုအပ်ဘဲ အမြဲအမှန်ချစ်ပေးထားမယ်ဆိုရင် Security ကို Risk ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အပြင်သင့် ဖုန်းရဲ့ High-Level အဆင့်တွေထဲကို မလိုလားတဲ့ Malware ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဝင်နိုင်သလဲ ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Public Location တွေဖြစ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို USB Charging Port နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြု ခဲ့မိမယ်ဆိုရင် USB Debugging Mode ကို Enabled ပေးထားတာကြောင့်ဝင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ USB Debugging Mode ကို Disabled အဖြစ် အမှန်ချစ်ကို ပြန်ဖြုတ်ထားဖို့ လိုတာကို အထူးသတိပြု ကြပါ။
Posted by Than Minn Naing at 2:30 AM